July 2019 – Kalfadhi
July 24, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Xeerka cusub ee dhismaha guddiga shaqaalaha rayidka ah ee Puntland oo baarlamanku ansixiyay Talaadadii 24ka Luulyo, 2019 ayaa la rajaynayaa inuu wax badan ka bedelayo xuquuqda shaqaalaha dowladda, hannaanka shaqaalaysiinta iyo horumarinta shaqaalaha oo dib u dhac weyni ka jiray. Waa xeer intiisa badan xoogga saaraya dhismaha guddiga, xilalkooda iyo waajibaadkooda isla markaasna caddaynaya in guddigu ay tahay inuu ku shaqeeyo xeerka shaqaalaha rayidka ah ee dowladda oo uu ansixiyay baarlamanka hore, sida uu sheegay Xildhibaan Cali Axmed Saalax, gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha. Baarlamanka ayaa aqlabiyad ku meel-mariyay…
Baarlamanka Puntland oo si adag uga hadlay xubno isugu jira culimo iyo ganacsato oo lagu xir-xiray Boosaso
July 22, 2019 July 22, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Golaha wakiillada Puntland ayaa sheegay in ay guul-daraysteen dadaalo dhawr ah oo guddoonka iyo qaar ka mid ah baarlamanku ay xukuumadda ugu jeediyeen in la sii daayo saddex ka mid ah wadaadada iyo ganacastada gobolka Bari. Ragga xir-xiran ayaa ka mid ahaa guddi ay dowladdu qayb ka tahay oo sannadkii hore isu xilqaamay in la dayactiro jidka hawl-bowlaha ah ee magaalada oo aad u burburay. Xubnahan ganacsatada ayaa la xiray dabayaaqadii toddobaadkii hore, markii sida la sheegay ay diideen in ay dib u celiyaan lacag $150,000 oo dollar oo qayb…
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo ku biiray dedaalada lagu dhameynayo xiisadda Dabageed iyo Waare
July 11, 2019 Kalfadhi
Sheekh Cusmaan Barre Maxamed, Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa gaaray magaalada Beladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan waxaana la socda Xildhibaano katirsan Golaha Wakiilada Hirshabeelle oo muddooyinkaan ku sugnaa magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa ku biiray dedaalo ka socda magaalada Beladweyne oo lagu dhex dhexaadinayo Guddoomiyihii Gobalka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, iyo Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Khilaafka labadaan mas’uul oo taagan ku dhowaad 40 cesho ayaa sababay in ay istaagaan dhamaan shaqooyinkii Hirshabeelle ee gobalka Hiiraan iyo xiisad muddo dheer ka taagan Gudaha magaalada taas oo walaac ku beertay…
Soomaaliya oo beenisay in Itoobiya uu ka dhacayo kulan u dhaxeeya Farmaajo iyo Kenyatta.
July 11, 2019 July 11, 2019 Kalfadhi
Wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, ayaa beeniyay warar maalmihii la soo dhaafay ay qorayeen Warbaahinta Soomaalida, Kenya iyo midda Itoobiya, kaas oo ku saabsan in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya uu dhex dhexaadinayo labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Axmed Ciise Cawad, ayaa sheegay in uusan jirin shir 13-ka bishaan ka dhacaya magaalada Adis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya islamarkaana looga hadlayo muranka Badda ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka Arrimaha Dibbada oo wareysi siiyay BBCda ayaa sheegay in wasaaraddiisu qaabilsantahay arrimaha dibadda wararkaasna ay yihiin kuwo laga been abuurtay.…
July 10, 2019 July 10, 2019 Cabdiraxmaan Maxamed
Gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiillada Puntland Xildhibaan Cali Axmed Saalax (Dhahar) ayaa walaac ka muujiyay habka ay wasaaradda waxbarashada DFS u wajahday waxbarashada Puntland, bilihii u dambeeyay. Xildhibaan Cali oo hadal ka jeediyay shaacinta imtixaanka shahaadiga ah ee Puntland wuxuu sheegay in warar bishii May ka soo baxay wasaaradda waxbarashada DFS ah ay carqalad ku yihiin waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee deggan Puntland. “Waxyaabihii nagaga imanayay dowladda federaalka ah siiba wasiirka wasaaradda, waxaanu ka xunnahay in ay carqalad ku noqdaan meeshii keliya ee Soomaaliya ay ka dhisnayd waxbarashadu oo…
July 10, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale oo katirsan xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goordhow Xildhibaanada ka jor sheegay in Ergadii soo dooratay Golaha Shacabka ay halis ugu jiraan Al-shabaab loona baahan yahay in dagaal mideysan lagu qaado Al-shabaab. “Dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa u yeeray Ergadii na soo dooratay waxayna ku jiraan halis amni sidaas darteed waa inaa galnaa dagaal ka dhan ah Al-shabaab”ayuu ka hor sheegay Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale. Xildhibaan Afaraale ayaa ku baaqay in Soomaaliya ay u baahantahay in qof kasta uu gurigiisa…
Xildhibaan Dr Cabdi Cali, ayaa ka hadlay lacagaha miisaaniyadda aan ku jirin ee sida kale loo isticmaalay, wasiirkii isticmaalo lacag aan loo ansixin waa tuug waana in lasoo xiro” ayuu yiri Xildhibaan Dr Cabdi Cali. Xildhibaan Dr Cabdi Cali, ayaa waydiiyay Guddoonka Golaha Shacab lacago wasaaradda Maaliyadda ay sheegtay in uu qaatay Baarlamaanka Soomaaliya “yaa qaatay Guddoomiye noo sheegay lacagta wasaaradda Maaliyadda nagu sheegatay” ayuu yiri Xildhibaan Dr Cabdi Cali. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow, ayaa sheegay in lacagtii loogu talagalay qaaraanka iyo Tacsida ee laga jaray Golaha Shacab ka aan…
Waxaa maanta lagu wadaa in maanta magaalada Muqdisho ay kulan ku yeeshaan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaana shir guddoomin doona Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee Golaha Shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudeey. Ajandaha Kulanka maanta ee kulanka Golaha Shacabka ayaa ah Akhrinta 2aad ee Hindise Sharciyeedka Duulista Hawada ee Rayidka iyo Akhrinta 3aad ee Xisaab Xirka Sanadka 2017 sida lagu shaaciyay fariin lala wadaagay Xubnaha Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa loo diray fariimo muujinaya in kulanka Golaha shacabka uu maanta furmaya, iyadoona xildhibaanada lagu amray in aysan…
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Gobalada Waqooyi oo Xukuumadda ku eedeeyay in ay sii fogeynayso Soomaaliland
July 9, 2019 Kalfadhi
Wasaaradda Arimaha Dibadda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore soo saartay amar ku socda wadamada caalamka, kaas oo ahaa in dalalka martiqaadka u sameynaya masuuliyiinta Soomaaliland ay ku soo wargeliyaan Dowladda Federaalka Soomaaliya, kadib markii uu muran ka dhashay qaabkii Dowladda Gini u soo dhowaysay Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ay degaan doorashadoodu tahay gobalada Waqooyi ee Soomaaliya ayaa Xukuumadda ku eedeeyay in ay qaadatay go’aanno deg deg ku jiro oo aan laga tala gelin Xubnaha Soomaaliland ku matala DF-ka Soomaaliya. Dr Cilmi Maxamed Nuur…
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulamo kawada Gobalka Bakool
Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulamo kawada degmada Xudur ee xarunta gobalka Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliy. Mursal iyo wafdigiisa ayaa la kulmay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka gobalka Bakool, xalay iyo shalay gelinkii dambe waxaana laga wada hadlay dhibaatooyinka ka jira degmooyinka Bakool. Waxyaabaha ay dhinacyada isku hadal qaadeen waxaa kamid ah go’doonka muddo 7 sano ah saaran degmooyinka gobalka iyo xaaladda adag oo ka jirta gobalkaasi, sida uu noo sheegay mid kamid ah waxgaradkii la kulmay Mursal. Malaaq Xasan Cumar,…